XOG: Nikola Kalinic oo Khamiista caafimaadka u maraya AC Milan (Milan oo deg deg ah u doonaysa) – Gool FM
XOG: Nikola Kalinic oo Khamiista caafimaadka u maraya AC Milan (Milan oo deg deg ah u doonaysa)
Raage August 15, 2017
(Firenze) 15 Agoosto – AC Milan ayaa sida lasoo werinayo doonaysa inay karraariso wada xaajoodka ay kula jirto Fiorentina oo ay ka doonayso Nikola Kalinic oo ay rabaan inuu ugu yaraan goobjoog u ahaado lugta hore ee ay Shkendija Khamiista ku wajahayaan Europa League.
Warar badan oo soo baxaya ayaa sheegaya in Milan ay laacibka kusoo qaadanayso €25m iyo €5m oo bareemiyo ah si ay u helaan adeegga laacibkan caalamiga ah ee reer Croatia iyadoo la sheegayo inuu Khamiista caafimaadka u marayo Milan.
Milan ayaa doonaysa in laacibku uu ugu yaraan tarabuunka soo fariisto lugta hore ee isreebreeb-horaadka Europa League ee ay la leeyihiin Shkendija, yeelkeede, Sky Sport Italia ayaaba sheegaya in Milan ayba doonayso inuu kaydka soo fariisto ama ugu yaraan uu kulankan u diiwaan gashanaado.
Hadafka ugu wayn ayaa ah in Kalinic uu diyaar u noqdo kulan-bilowga horyaalka Talyaaniga ee Serie A ee ay Rossoneri ugu safrayso Critone Axadda soo aaddan.
Klinic ayaa 15 gool Viola u dhaliyay 32 kulan oo uu sanadkii tegey u saftay Serie A, isagoo 5 gool ka dhaliyay 8 gool oo uu saftay Europa League.
GOOGOOSKA & SAWIRRADA: Hoffenheim vs Liverpool 1-2 (Liverpool oo lugta hore badisay)
Kabtanka Barcelona Andres Iniesta oo seegaya kulanka caawa ee El Clasico